Qorshe dib loogu dhigayo bannaan-baxa beri oo socda | KEYDMEDIA ENGLISH
Qorshe dib loogu dhigayo bannaan-baxa beri oo socda
Odayaasha dhaqanka ayaa wada qorshe dib loogu dhigayo, dibadbaxa beri ka dhacay Muqdisho, kaasoo horseedi kara qalalaase hor leh, maadaama lagu kala aragti duwan yahay
MUQDISHO, Soomaaliya- Waxaa iminka Hotel Afrik shir ku leh, odayaasha dhaqanka Muqdisho, kuwaa oo wada qorshe ay dib ugu dhigayaan bannaan-baxa beri ka dhacaya gudaha Caasimadda.
Odayaasha dhaqanka ayaa kulan la qaatay, midawga musharaxiinta, iyagoo ku wargaliyey dalabkooda ah in la hakiyo dibadbaxa maalinta beri ah dhacaya, waxaana wararku sheegayaan, in mucaaridku uu aqbalay qorshaha odayaasha dhaqanka.
Dibadbaxan looga soo horjeedo, fikirka keli talisnimasa ee Farmaajo, ayaa ah mid ay ku kala aragti duwan yihiin dhinacyada isku haya siyaasadda, waana mid keeni kara qalalaase dalka u horseeda xasilooni darro.
Odayaasha ayaa sidoo kale kulan la yeelan doona, maamulka gobolka banaadir, si loo dejiyo xiisada taagan, ee ka dhalatay dibadbaxa ay ku baaqeen midawga musharaxiinta.
Maamulka gobolka banaadir oo gabay masuuliyadoodii, amniga iyo tan bilicda, ayaa iminka ku howlan in ay caburiyaan shacabka Muqdisho, waxaana tallaabadan ay ka dhigan tahay mid bulshada looga hor istaagayo, muujinta dareenkooda ku aaddan hoggaanka fashilmay.